गर्नैपर्छ, सकिन्छ भन्ने मानसिकता बनाउन जरुरी छ – प्रचण्ड – cmprachanda.com
२०७४ माघ २ गते १८:२३ मा प्रकाशित
राज्य व्यवस्थालाई भत्काउन, ध्वंशात्मक युद्ध गर्दै बन्दुक उठाउने विद्रोही नेता र राज्य व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्दै शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका लागि कलम उठाउने नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संक्षिप्त परिचय हो । विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन र घटनाक्रममा प्रचण्डको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । वर्तमान राजनीति, वाम गठबन्धनको भविष्य र सरकार गठनका विषयमा कुराकानी गर्न प्रचण्ड नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा उपस्थित भए । प्रचण्डसँग फेसबुक लाइभमार्फत गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
मैले यस सन्दर्भमा बढो प्रस्टसँग के भनेको छु भने कांग्रेसले पनि हिजोदेखि विभाजित भएका सबैलाई एकीकृत गरोस् । त्यो पनि राष्ट्रको हितमा हुन्छ । खालि कम्युनिस्टबीचको एकता मात्रै राष्ट्रको हितमा हुन्छ भनेर मैले कहिल्यै भनेको छैन । हिजो विभाजित भएका केही त एकतावद्ध भइसक्नुभयो । महन्थ ठाकुरजीहरू पनि किन अलग बस्नुपर्‍यो ? उहाँहरू पनि लामो समयदेखि कांग्रेसमै हुनुहुन्थ्यो । विचार मिल्नेजति एक ठाउँमा हुँदा राष्ट्रको समृद्धि हुन्छ । त्यसकारण हामीले गरेको यो वाम गठबन्धन या ध्रुवीकरणको यो प्रयास राष्ट्रको ऐतिहासिक आवश्यकतासँग जोडिएको छ । यसो नगरी देशमा विकास, समृद्धि गर्न या संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो समाजवाद उन्मुख दिशामा अघि बढ्न सम्भव छैन । हामीले पछाडि फर्किने पुल भत्काइसकेका छौँ । पछाडि फर्किने ठाउँ नै छैन । पार्टी एकता निर्वाचनमार्फत जनताले दिएको यो जनादेश पनि हो ।
तपाईंले भनेजस्तो भएको छैन भन्ने मेरो भनाइ छ । किनभने हामीले वाम गठबन्धन गरेर साझा घोषणापत्र तयार गर्दा निर्वाचनपछि विकासको मोडेल के हुने, सुशासन कसरी दिने, विकासलाई गति कसरी दिने भनेर त्यसको मोडालिटीका बारेमा, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको बारेमा सबैभन्दा बढी कुरा गरका छौँ । निर्वाचन अभियानको पूरै दौरानमा पनि विकास अभियानकै कुरा गरेका छौँ । कुनै नेता विशेषले कुनै खास भाषणमा के भन्यो भन्नेभन्दा पनि हाम्रो साझा घोषणापत्र, प्रतिबद्धता जनताका बीचमा कसरी प्रस्तुत भएको छ भन्ने प्रमुख विषय हो । हामीले शान्ति, सुशासन र समृद्धिमा जोड दिएका छौँ । १० वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा पाँच गुणा बढी वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएका छौँ । सहकारी मोडेल नेपाल तथा विश्वकै सन्दर्भमा एउटा विशेष मोडेलका रूपमा छ । यी तीनवटैको सहकार्यमा तीव्र आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ, एउटा नयाँ मोडेल बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छौँ ।
पक्कै छ । किनभने जोडिनु स्वाभाविक पनि हो । हामी चीन र भारतको बीचमा भूपरिवेष्टित अवस्थामा छौँ । त्यसकारण चीन र भारतको विकास, त्यहाँको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा नेपालको सम्बन्ध जहिले पनि रहन्छ । जबसम्म नेपाल, भारत र चीन भन्ने देश यही रूपमा रहिरहन्छन्, तबसम्म हाम्रो सम्बन्ध विशिष्ट अवस्थाको रहिरहन्छ । सुगौली सन्धिदेखि लामो समयसम्म जुन खालको सम्बन्धको स्थिति बन्यो नेपालका राजामहाराजा र विदेशी शक्ति केन्द्रले नेपाल फुटाऊ र शासन गर भन्ने मान्यताअनुसार नै नेपालको राज्यमाथि आफ्नो कुनै न कुनै खालको प्रभाव, प्रभुत्व राखिराख्ने प्रयास गरे । कसैलाई ‘प्रो–इन्डियन’ बनाउने त कसैलाई ‘प्रो–चाइनिज’ बनाउने काम भयो । तथाकथित राष्ट्रवादीको नाममा नेपाललाई राजनीतिक कलहको केन्द्र बनाइरराख्ने अवस्था रह्यो । अहिले मैले जोड दिएर हामीले त्यो सोच बदल्नुपर्छ भन्दै आएको छु । अब हामी न ‘प्रो–इन्डियन’ न ‘प्रो–चाइनिज’, केवल ‘प्रो–नेपाली’ हौँ । नेपाल र नेपालीको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दुवै छिमेकीको सकारात्मक कामबाट लाभान्वित हुने दिशातर्फ नेपाल अघि बढ्नुपर्छ ।
तपाईं, हामी नेपालीको बानी बिग्रिएर केही गर्न सकिँदैन भन्ने मात्रै सोच्छौँ । सकिन्छ, गर्ने हो भन्नेतर्फ ध्यान नै छैन । हामी ५०औँ वर्षदेखि सकिँदैन भन्ने विषयमा मात्रै तालिमप्राप्त भएका छौँ । आउँदैन, हुँदैन, सकिँदैन, एकले अर्कालाई खुट्टा तान्ने बानी परेकाले त्यस्तो लाग्ने हो । म प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै गरेको त होइन । लोडसेडिङ हटाउन थोरै मिहिनेत गरियो । राम्रा अफिसरलाई ल्याएर अफिसमा राख्दा तपाईं, हामीले सोच्दै नसोचेको कल्पनाभन्दा बाहिरको लोडसेडिङ हटाउने काम भयो । मधेसी जनता निर्वाचनमा पहाडियाभन्दा उत्साहका साथ आउलान् भन्ने सोच्नुभएको थियो तपाईंहरूले ? हामी कसैले पनि सोचेका थिएनौँ । आए नि त । निर्वाचनमा पहाडमा ७३ प्रतिशत र मधेसमा ७७ प्रतिशत मतदाताले भाग लिए ।
By cmprachanda	 Jan 16, 2018